Fampirantiana fantsom-bidy tsara indrindra, efijery mitondra fanofa-bolo, rindrina avo lenta, rindrina fanitsiana arak'entana amidy
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Fampisehoana tariby manofa-drarenta,Làlam-pandeha fanofana,Led Wall Wall,Rental Screen Rental,,
Home > Products > Fampisehoana LED manofa
Fampisehoana LED manofa
Ny vokatra avy amin'ny Fampisehoana LED manofa , mpanofana manokana avy any Shina, Fampisehoana tariby manofa-drarenta , Làlam-pandeha fanofana mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Led Wall Wall R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Fakan-jiro LED PF-2.6I
Fakan-jiro LED PF-2.8I
Shina Fampisehoana LED manofa mpamatsy
Lamba fisehoana LED manofa
Ny teknolojia LED no farany sy tsara indrindra amin'ny lafiny teknolojia ara-teknika ao ary mbola mivoatra izany. Misy fanamafisana mafy amin'ny fanaovana LED hampiseho angovo mahomby, vidiny mahomby ary lanja maivana ankoatra ny fepetra ilaina amin'ny kalitao. Noho izany, ny kabinetra LED dia andrasana ihany koa ho maivana kokoa amin'ny lanja. Io filàna io dia nahatonga ny fanovana tsikelikely avy amin'ny kabinetra vy, ny kabinetra aluminium, hatrany amin'ny cast-alumina ary ny fantsona alumina maty fa maivana kokoa ny lanjan'ny kabinetra. Lasibatra alumina sy maty cabinets maty cast-alumina no farany ny kabinetra ampiasaina amin'ny casing LED.
Ny aluminium cast sy ny kabinetra vita amin'ny cast-aluminium dia manana tanjaka avo ary avo be. Izy ireo dia tena mahomby, manome hafanana hafanana be dia be, fiarovana ny angovo ary fiarovana ny tontolo iainana. Noho ny fampiasana azy ireo ivelan'ny ivelany dia azo atao ho toy ny kabinetra mitera-drano amin'ny alàlan'ny fantsom-bazaha alumina. Izy ireo dia maivana sy ultrathin. Izy ireo dia mora apetraka tsara ho an'ny fonosana mora sy manangana. Manana haingam-pandeha avo lenta izy ireo, grayscale avo ary be dia be ampiharina amin'ny fanofana trano. Mora sy tsotra izy ireo nametraka ary noho izany dia manampy anao hamonjy amin'ny fotoana sarobidy sy ny fahefan'ny olona satria afaka manao ny tsy fandriam-pahalemana ny olona tokana. Haingana sy azo antoka ny kabinetra Kabinetra. Tsy hoe tsara tarehy fotsiny eny. mety ho simba mora foana izy io. Casting Aluminum ary maty Casting Aluminum Kabinetra manana fananana fanoherana tsara kokoa.
Fampisehoana tariby manofa-drarenta
Led Wall Wall
Fampisehoana tariby fanofa-bary